किन गर्छन मानिसले आत्म हत्या ? बरिष्ठ मनो चिकित्सक यसो भन्छन् (भिडियो सहित) » खबरहरुको एउटै केन्द्र
किन गर्छन मानिसले आत्म हत्या ? बरिष्ठ मनो चिकित्सक यसो भन्छन् (भिडियो सहित)
मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १२:४६ मा प्रकाशित !
काठमाडौं, १६ वैशाख । आजभोली हामीले दिनहुँ आत्महत्याका समाचार पढ्ने र सुन्ने गरेका छौं । तपाईले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, नेपालमा एक दिनमा कति जना मानिसले आत्महत्या गर्छन होला ? नेपालका बरिष्ठ मनोचिकित्सकहरुले आत्महत्याका सम्बन्धमा डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपालमा एक दिनमा १४ जना ब्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । आत्महत्या गर्नेहरु मध्ये ९० प्रतिशतमा मानसिक समस्या देखिएको छ । नेपालमा ६० लाख मानिस मानसिक समस्यामा छन् । चार वर्ष यता वर्षेनी १३ प्रतिशतका दरका आत्महत्या गर्नेहरुको दर बढ्दै गएको छ । डिप्रेशनका कारण यो तथ्याङ्क बढ्दै गएको हो । नेपालको शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामिण क्षेत्रमा आत्महत्या गर्नेहरुको दर बढ्दो क्रममा छ ।
काठमाडौं स्थित शिक्षण अस्पतालमा मात्र दैनिक एक सय जना मानसिक रोगका विरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । त्यसमा ६० प्रतिशत महिला हुनेगरेको मनोचिकित्सक डा सरोज ओझाले बताए । ‘मानसिक अस्पतालमा जाँदा समाज र परिवारले नराम्रो ढंगले हेर्ने भएकाले शिक्षण अस्पतालमा त्यस्ता बिरामी बाक्लै आउने गरेका छन्, उनले भने अस्पताल आउनेमा महिलाको संख्या अत्याधिक छ ।’
मनोचिकित्सकहरुले पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी मानसिक समस्या देखिएको पाइएको बताएका छन् । मानसिक समस्या देखिएकाहरुमा ७० प्रतिशत महिला छन् भने ३० प्रतिशत पुरुषमा यो समस्या देखिएको छ । प्रजनन उमेर समुहका महिलाहरुमा बढी डिप्रेशनको समस्या देखिएको चिकित्सकहरुको भनाई छ । नेपालमा महिलाको मृत्युको पहिलो कारण आत्महत्या भएको देखिएको छ । १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समुहका महिलाको मृत्युको पहिलो कारण आत्महत्या भएको डरलाग्दो तथ्याङ्क देखिएको हो ।
मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र नेपालले आफ्नो १५ औं वार्षीक उत्सवका अवसरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित वरिष्ठ मनोचिकित्सकहरुले यस्तो बताएका हुन् । सो संस्थाले विभिन्न जिल्लामा गरेको कामका आधारमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा यस्तो देखिएको हो ।
वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. कपिलदेव उपाध्यायाले महिलामा सामाजिक उत्तर दायित्व थपिदै जानु तर समाजले नै महिलालाई सहयोग नगर्न भएकाले महिलामा यो समस्या बढ्दै गएको बताए ।
श्रीमान बैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरुमा यस्तो समस्या बढी देखिएको छ । ‘डिप्रेशनमा पुगेका महिलाहरुलाई श्रीमानले माया गरे मात्र ६० प्रतिशत रोग निको हुन्छ, उनले भने, कमजोर महिला माथि समाज र परिवारले गर्ने प्रहारका कारण त्यस्ता महिलाहरु आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन् ।’
एनले त्यस्ता समस्या भएका ८० प्रतिशत महिला चिकित्सकको पहुँचमा पुग्न नसकेको बताए । मानसिक समस्या भन्ने बित्तिकै समाज र परिवारले फरक ढंगले हेर्ने भएकाले महिलाहरु चिकित्स कहाँ जान नचाहने उनको भनाई छ । सबै मानसिक रोगीहरुले औषधि खान नपर्ने र परामर्शवाट मात्र पनि निको पार्न सकिने चिकित्सहरुले बताएका छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: इरानमा पुरुष भेषमा रङ्गशाला पसेका युवतीहरुको फोटो भयो भाइरल
NEXT POST Next post: तेश्रो त्रैमासिकमै वाणिज्य बैंकको मुनाफा तीन अर्ब आठ करोड
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १२:४६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १२:४६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १२:४६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १२:४६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १२:४६